मुटुको स्वास्थ्यको ख्याल राख्न चिकित्सक पौड्यालको सुझाव | We Nepali
२०७७ मंसिर ११ गते २०:५०
लन्डन । नेपाल पत्रकार महासंघ बेलायतले आइतबार दोश्रो स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम गरेको छ । कोभिड १९ महामारीका बेला समुदायको स्वास्थ्य सरोकारबारे छलफल गरी आममानिसलाई थप सचेत बनाउने उद्देश्यअन्तर्गत एकजना वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञसंग अन्तरसंवाद भएको हो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ बेलायतका सचिव जगन कार्कीले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा डा. पौड्यालले मुटु २४ सै घण्टा चल्ने मानिसको एकदम क्रियाशिल अंग रहेको जनाउंदै उनले शारीरिक परिश्रम गर्दा यो अझ क्रियाशील हुने बताए । मानिसको मुटुको धड्कन २४ घण्टामा १ लाख चोटी हुने र त्यसले २ हजार ग्यालेन रगत शरीरमा पम्प गर्ने पनि डा. पौड्यालले जनाए । शरीरका सबै नली जोड्ने हो भने करिब ६० हजार माइल रगतको नली हुने चर्चा गर्दै उनले मुटुले काम रोक्यो भने केही मिनेटभित्रै मस्तिष्क, किड्नी, लिभर, फोक्सोले रगत नपाई ती मुख्य अंग निष्क्रिय हुने भएकाले मुटुको स्वास्थ्यमा अझ बढी ख्याल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
मुटु रोग अनुवंशीय पनि हुने जनाउंदै डा. पौड्यालले सन्तुलित आहार, व्यायाम, अनुशासित जीवनशैली र नियमित स्वास्थ्य परीक्षणमा विशेष ध्यान दिन सुझाए । मुटु रोगमा सबैभन्दा बढी कोरोनरी आर्टरी डिजिज हुने उल्लेख गर्दै उनले बोसो जम्मा भइ रगतको नली सांघुरिएर हार्ट अट्याक हुन सक्ने र यो महिला भन्दा पुरुषमा बढी जोखिम रहेको औंल्याए । ब्लडप्रेसर उच्च हुंदा हृदय र मस्तिष्क घातको बढी सम्भावना हुने उनको बुझाइ छ ।
मुटु र अन्य धेरै रोगबाट बच्न सन्तुलित खाना र शारीरिक व्यायामको ठूलो महत्व रहेको उनले प्रष्टयाए । एक दिनमा कम्तीमा तीस मिनेट अथवा सातामा एकसय ५० मिनेट हिंड्न उचित हुने विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि सिफारिस गरेको उनको भनाइ थियो ।